थोरै बिजुली प्रयोग गर्ने तपाईंको घरको लागि उत्तम इलेक्ट्रिक स्टोभहरू
स्टोभ को सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकार मध्ये एक हो इलेक्ट्रिक स्टोभ, जसले हामीलाई कोठा वा कुनै पनि बन्द ठाउँलाई धेरै सहज र सरल तरिकाले तताउन अनुमति दिन्छ। अरु के छ त बिजुली तताउने को लागी धन्यवाद, कुनै पनि प्रकार को ग्यास वा धुवाँ उत्सर्जन गर्दैन, त्यसैले तिनीहरू मानिसहरूको लागि धेरै खतरनाक छैनन्।
यद्यपि, र विद्युतीय चुलोको लागत सामान्यतया धेरै उच्च नहुने तथ्यको बावजुद, हामीसँग बिजुलीको सँधै बढ्दो मूल्यको हानि छ। यसको मतलब यो हो कि यस प्रकारको चुलो प्रयोग गर्नु, कम खपत हुने बिजुली स्टोभ भए पनि, अन्य उपलब्ध विकल्पहरूको तुलनामा साँच्चै महँगो हुन सक्छ।
बिजुली स्टोभ को तुलना
AVANT AV7574 - स्टोभ ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Blumfeldt चमकदार हट रडि ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
AVANT AV7554 - स्टोभ ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
अब म सोच्दैछु एक... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
बायोमास स्टोभ बिना ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	AVANT AV7574 - स्टोभ ...
मूल्य गुणस्तर	Blumfeldt चमकदार हट रडि ...
हाम्रो मनपर्ने	AVANT AV7554 - स्टोभ ...
अब म सोच्दैछु एक...
बायोमास स्टोभ बिना ...
सबै भन्दा राम्रो बिजुली स्टोभ
त्यसो भए हामी तपाईलाई केहि उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक स्टोभहरू देखाउन जाँदैछौं जुन हामीले हाल बजारमा फेला पार्न सक्छौं;
रोवेन्टा कम्फर्ट साइलेन्स...
विशेष गरी बाथरूम वा उच्च आर्द्रता भएको क्षेत्रहरूको लागि डिजाइन गरिएको, यो Rowenta स्टोभ जाडोमा हाम्रो सबैभन्दा राम्रो बन्डल हुन सक्छ, उदाहरणका लागि हामीलाई नुहाउनु अघि बाथरूम तातो गर्न अनुमति दिन। 2.400 W को शक्ति संग हामी यसलाई धेरै समस्या बिना ठूला कोठाहरू तताउन प्रयोग गर्न सक्छौं।
यसको मूल्य 54.99 यूरो हो, जसले यो इलेक्ट्रिक स्टोभलाई हामीले हाल बजारमा फेला पार्न सक्ने उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक बनाउँछ।
कम्फर्ट मिनी एक्सेल इको
यदि हामीले के खोजिरहेका छौं त्यो हाम्रो स्टोभ वा हीटरको लागि शक्ति हो भने, हामी निर्णय गर्न सक्छौं कम्फर्ट मिनी। र यो हो कि यसले हामीलाई 2.000 W सम्मको पावर प्रदान गर्दछ, र दोस्रो विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्छ जसमा पावर 1.000 W मा रहन्छ।
थप रूपमा, र यदि यो सबै थोरै देखिन्छ भने, यसले पनि समावेश गर्दछ "मौन" मोड जसले यस प्रकारको यन्त्रको सधैं कष्टप्रद आवाज कम गर्दछ।
यदि हामी एउटा सानो, सस्तो बिजुली स्टोभ खोज्दैछौं जसले शक्तिको iota गुमाउँदैन भने, हामीले फेला पार्न सक्ने उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो। Tristar KA - 5039। र यो एक संग छ २,००० वाट सम्मको पावर हामी यसलाई मुट्ठीभर युरोमा किन्न सक्छौं।
सिरेमिक हिटर बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो र यो रोवेन्टाबाट आएको हो जसले यसलाई तातोमा रूपान्तरण गर्न बिजुली प्रयोग गर्दछ। Amazon मा सबै भन्दा राम्रो बिक्रेता मध्ये एक। यसले हामीलाई दुई पावर स्तरहरू प्रदान गर्दछ, अधिकतम 2000 W।
यसको सबैभन्दा चाखलाग्दो सुविधाहरू मध्ये एक हो "एन्टिफ्रोस्ट" प्रकार्य यसले हामीलाई ५०% सम्मको ऊर्जा बचत गर्न अनुमति दिन्छ, एक इलेक्ट्रोनिक थर्मोस्ट्याट जसले तापक्रमलाई एकदमै ठीकसँग नियमन गर्छ र मौन कार्य गर्दछ ताकि हामीले स्टोभ अन गरेको पत्ता लगाउनु पर्दैन।
यदि हामी के खोज्दैछौं सबै शक्ति भन्दा माथि छ, निस्सन्देह यो स्टोभ Orbegozo FHR 3050 हाम्रो छनौट हुनुपर्छ, धन्यवाद ३,००० वाट पीक पावर त्यो प्रस्ताव गर्दछ।
यसको लागि धन्यवाद, हामी धेरै छोटो समयमा ठूला ठाउँहरू तताउन सक्छौं। थप रूपमा, यसको मूल्य बिल्कुल पागल छैन किनकि यो सामान्यतया हुन्छ जब उपकरणको शक्ति बढ्छ।
कम खपत हुने बिजुली स्टोभहरू बढ्दो लोकप्रिय भइरहेका छन् यस तथ्यको लागि धन्यवाद कि अन्य स्टोभहरू जस्तै, तिनीहरूले हामीलाई कोठा वा कोठाहरू तताउन अनुमति दिन्छ, हामी पनि। तिनीहरूले हामीलाई केही यूरो, केही ऊर्जा बचत गर्न र वातावरण प्रदूषित गर्न अनुमति दिन्छ, मुख्यतया तिनीहरूले ग्यास प्रयोग गर्दैनन् वा कुनै पनि प्रकारको धुवाँ छोड्दैन भन्ने तथ्यको कारणले। कम खपत इलेक्ट्रिक चुलो
यस प्रकारको बिजुली स्टोभको ठूलो फाइदा निस्सन्देह छ कि तिनीहरूसँग एक छ धेरै कम खपत कुनै पनि अन्य प्रकारको स्टोभ भन्दा, मुख्यतया यो ऊर्जा को राम्रो उपयोग को लागी धन्यवाद।
सस्तो बिजुली स्टोभ
इलेक्ट्रिक स्टोभहरू तिनीहरूको कम मूल्यको लागि ठूलो हदसम्म बाहिर खडा छन्, र यो हाल हो हामीले यस प्रकारको स्टोभ धेरै कम यूरोमा बजारमा पाउन सक्छौं। यहाँ हामी तपाईंलाई सस्तो बिजुली स्टोभका केही उदाहरणहरू देखाउँछौं;
ओर्बेगोजो बीपी 3200 - स्टोभ ...
25 यूरो भन्दा कम यसले हामीलाई बिजुली स्टोभको लागि खर्च गर्नेछ यसले हामीलाई 1000W को पावर प्रदान गर्दछ र यसले हामीलाई कुनै पनि सानो कोठालाई कुनै पनि समयमा तातो बनाउन अनुमति दिन्छ। यो Amazon मा सबै भन्दा धेरै बिक्रि हुने बिजुली स्टोभ मध्ये एक हो र यो यो हो कि यो मूल्य संग तपाईले यो भन्दा राम्रो गुणस्तर / मूल्य अन्य कुनै ठाउँमा र कुनै अन्य उपकरणमा पक्कै पाउनुहुनेछैन।
यदि तपाइँ सस्तो बिजुली स्टोभ किन्नको लागि पनि शैली र वर्ग हुन चाहनुहुन्छ भने, यो Orbegozo FH 5030 नीलो फिनिशको साथ तपाईंको लागि उपयुक्त छ। यसको डिजाइनको अतिरिक्त, यसको विशिष्टताले तपाईंलाई असन्तुष्ट छोड्ने छैन र यसको मूल्य आज Amazon मा लगभग 30 यूरो छ, वा के समान छ, एक वास्तविक सम्झौता।
यसको पावर 2500 W मा अवस्थित छ जुन धेरै ठूलो नभएको कुनै पनि कोठा तताउन वा चिसो जाडो दिनमा तपाईंलाई न्यानो दिन पर्याप्त भन्दा बढी हुनेछ।
ओर्बेगोजो बीपी 5008 - स्टोभ ...
यो Orbegozo BP 5008 यो एक धेरै साधारण बिजुली स्टोभ हो, 1200 W सम्म वांछित पावर छनौट गर्ने सम्भावनाको साथ, जसले हामीलाई साना कोठाहरू छिट्टै र जटिलताहरू बिना तताउन अनुमति दिनेछ।
यसको मूल्य सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी छ र पक्कै पनि तपाईले अमेजनले हामीलाई प्रस्ताव गरेको भन्दा राम्रो मूल्य पाउनुहुनेछैन।
FM 2302C इलेक्ट्रिक स्टोभ ...
एक संग क्लासिक डिजाइन यो विद्युतीय चुल्होको धेरै किफायती मूल्य छ र हामीले पहिले नै समीक्षा गरिसकेका जस्तै, धेरै उच्च नभएको तर कोठा तताउन पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्दछ, यसको खपत आकाश छाडे बिना।
सजावटी ज्वाला प्रभाव इलेक्ट्रिक स्टोभ
त्यहाँ धेरै प्रकारका इलेक्ट्रिक स्टोभहरू छन्, जसमध्ये ती मध्ये अधिक र अधिक खडा हुन्छन् ज्वाला प्रभाव। घरको मुख्य कोठामा राखेर, तिनीहरूले डबल प्रकार्य गर्छन्। एकातिर तिनीहरू सजावटी छन्, कोठा र सामान्यतया घरमा एक सुरुचिपूर्ण स्पर्श दिँदै, र अर्कोमा तिनीहरू कोठा वा घर तताउने कार्यहरू गर्छन्.
धेरैजसो अवस्थामा, तिनीहरूले परम्परागत फायरप्लेसलाई प्रतिस्थापन गर्छन्, नक्कली काठ वा चारकोल लगहरू, जुन प्रकाश प्रणालीमा आधारित सफल एनिमेसन बाहेक अरू केही होइन। भित्र हामीले विद्युतीय प्रतिरोध फेला पार्छौं, जुन अधिकतम 1000 देखि 2000 वाट सम्मको पावर हुन सक्छ र त्यो पङ्खासँग मिलेर हामीलाई कोठाभरि तातो वितरण गर्न अनुमति दिन्छ।
साथै यस प्रकारको स्टोभहरू पूर्ण रूपमा अलग काम, भन्नुको मतलब, एकातिर हामीले एनिमेसन प्रयोग नगरीकन, इमानदारीपूर्वक धेरै दुर्लभ चीजहरू, वा तताउने अन नगरिकनै सजावटी कल प्रभाव खोलिएको स्टोभ आफैंले काम गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि, गर्मीको गर्मीको रातमा हामी सजावटी ज्वाला यसको अगाडि बसेर पढ्न सक्छौं, तर स्टोभ जलाउन बिना।
बिजुली स्टोभ को प्रकार
अर्को हामी पूरा गर्न जाँदैछौं बिजुली स्टोभ को विभिन्न प्रकार को समीक्षा त्यो अवस्थित छ:
क्वार्ट्ज स्टोभ; यस प्रकारको स्टोभ सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो जब यो बाथरूम जस्ता साना कोठाहरू तताउने कुरा आउँछ। यसको साइज एकदम सानो छ र यसको मूल्य र खपत पनि एकदम कम छ।
हलोजन हीटर; तिनीहरू एक प्रकारको बिजुली चुलो हुन्, जसले यसको हलोजन बारहरू मार्फत विकिरणद्वारा पनि काम गर्दछ, जुन ग्यास बल्बहरू भन्दा बढी होइन। यसको मुख्य फाइदाहरूमा सुरक्षात्मक ग्रिडसँग घर्षण वा सम्पर्क विरुद्ध उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने सुरक्षा समावेश गर्दछ। थप रूपमा, तिनीहरूले प्रदूषित गर्दैनन्, तिनीहरू कोठामा अक्सिजन उपभोग गर्दैनन् र तिनीहरू साना कोठाहरू तताउन क्वार्ट्ज स्टोभहरू जस्तै आदर्श हुन्।
टर्बो हीटर स्टोभ; यस प्रकारका स्टोभहरू घरहरूमा सामान्य छैनन्, तर तिनीहरू, उदाहरणका लागि, क्याफेटेरियाहरूको बढ्दो संख्याको टेरेसहरूमा छन्। धेरैजसो बिजुली हुन्, यद्यपि हामीले भन्नै पर्छ कि ती मध्ये केही ब्युटेन ग्यास मार्फत जल्छन्।
तेल चुलो (विद्युत तेल); यस प्रकारको स्टोभ जनसंख्याको बीचमा सबैभन्दा सामान्य मध्ये एक हो। रेडिएटरहरू भनेर पनि चिनिन्छ, तिनीहरू विद्युतीय नेटवर्कमा प्लग गरी काम गर्छन्, यद्यपि तिनीहरू भित्र रहेको तेलले जल्छन्।
के बिजुली स्टोभ खतरनाक छ?
गृह सुरक्षा भनेको हामी सबै भन्दा माथि हुन चाहन्छौं। त्यसैले हिटरसँगको गलतफहमीका कारण घरमा आगलागी भएको यति धेरै समाचार सुनेपछि हामी शंकामा छौं । बिजुलीको चुलोले प्रतिरोध तताएर र हामीलाई चाहिने ताप प्रदान गरेर काम गर्छ। तर तपाईले केहि परिस्थितिहरू रोक्नु पर्छ ताकि अनावश्यक खतरा सिर्जना नगर्नुहोस्।
जाडो मौसममा हिटरका कारण घरमा फायर अलार्म बज्छ । ज्ञात केसहरूको 38,5% तिनीहरू गर्मी उत्पादन गर्ने उपकरणहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्। यी अवस्थाहरूबाट बच्नको लागि हामीले गर्नुपर्छ:
आवधिक रूपमा स्टोभ जाँच गर्नुहोस्। कर्ड र प्लग पनि प्राय: तातो हुन्छ, यो राम्रो अवस्थामा छ कि छैन भनेर जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो अलिकति जलेको छ वा कालो रंग छ भने, यो परिवर्तन गर्न राम्रो छ। यदि सुरक्षा जाल भाँचिएको छ वा क्षतिग्रस्त छ भने स्टोभ कहिल्यै प्रयोग गर्नु हुँदैन।
हीटरलाई र्यागले छोप्नु हुँदैन न त यो धेरै लामो समय को लागी सक्रिय छ। यी उपकरणहरूले धेरै ऊर्जा प्रयोग गर्छन् र धेरै तातो हुन्छन्। पावर स्ट्रिपहरू धेरै सकेटहरू र अधिकहरूसँग ओभरलोड नगर्नु महत्त्वपूर्ण छ यदि तिनीहरू उच्च शक्ति हुन्। यो पनि सिफारिस गरिएको छैन कि यसलाई टेबल मुनि टाँस्नुहोस्।
स्टोभलाई कुनै पनि ज्वलनशील पदार्थबाट टाढा राख्नुहोस्। यसलाई पर्दा, सोफा र कुर्सीहरू बीच एक मिटरको सुरक्षित दूरीमा राख्न आवश्यक छ।
एक बिजुली चुलो हुनु तपाईंसँग हुनुपर्छ बाथरूममा चरम हेरचाह। तपाईंले स्टोभ र नुहाउने वरपरको क्षेत्रको बीचमा सुरक्षा मिटर छोड्नुपर्छ। सबै भन्दा माथि, यसलाई नुहाउन वा भिजेको हातले सार्नको लागि कहिल्यै नउठाउनुहोस्।
बिजुलीका चुलो आफैंमा खतरनाक हुँदैनन्, तर सम्भावित खतराहरूबाट बच्न यसलाई प्रयोग गर्नुअघि तपाईंसँग केही पक्षहरू स्पष्ट हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
बिजुली स्टोभ कसरी काम गर्छ
धेरैले आफ्नो घरमा बिजुलीको चुलो देखेका छन् वा देखेका छन्। आफ्नो स्टोभलाई सधैं राम्रो अवस्थामा राख्न र यसले कुनै खतरा निम्त्याउँदैन, यो कसरी काम गर्दछ जान्न राम्रो छ।
बिजुली स्टोभ को सञ्चालन मा विभाजित छ:
एन्ट्राडा डे एनर्जी
स्टोभलाई सकेटमा जोडिएको छ र त्यहाँबाट बिजुली आउँछ। प्रतिरोध सक्रिय नभएसम्म उसले यसलाई तारहरू मार्फत लैजान्छ। यी स्टोभहरूलाई चाहिने भोल्टेज 240 भोल्ट हो, भान्साका उपकरणहरू विपरीत, जसलाई 120 भोल्ट चाहिन्छ।
तिनीहरूसँग भएको विद्युतीय फाइदा भनेको तिनीहरूले 8 amp प्लगहरू प्रयोग गर्छन्। यसले तारहरू सुरक्षित गर्न काम गर्दछ, किनकि त्यहाँ कम विद्युतीय प्रतिरोध हुनेछ र केबलहरू कूलर राख्न सकिन्छ। विद्युतीय चुलोलाई चाहिने सर्किट ब्रेकर ४० एम्प्स हो।
चुलोले बिजुलीको आउटलेटबाट केबलहरूद्वारा पठाइएको ऊर्जा सङ्कलन गर्छ र केन्द्रीय ट्रान्सफर्मरमा पठाउँछ। ऊर्जाले प्रतिरोधकहरूको लम्बाइ र चौडाइमा यात्रा गर्छ र तिनीहरूलाई न्यानो बनाउँछ। यसरी, स्टोभले बिस्तारै यसको वरपरको हावाको तापक्रम बढाउन सक्षम हुन्छ।
सामान्यतया सोचेको विपरित, स्टोभले प्रयोग गर्ने सबै ऊर्जा प्रतिरोधहरू तातो गर्न होइन। यसले आउटलेटबाट सङ्कलन गरेको ऊर्जाको अंश अन्य घटकहरूमा निर्देशित गरिन्छ। उदाहरणका लागि, धेरै स्टोभहरूमा तताउने क्षेत्रहरू छन्, चेतावनी लाइटहरू जसले हामीलाई के प्रतिरोध तातो छ भनेर देखाउँदछ त्यसैले हामी यसको नजिकै छुँदैनौं। साथै, तिनीहरूसँग टाइमरहरू पनि छन्।
यी सबै घटकहरूलाई काम गर्न बिजुली चाहिन्छ।
इलेक्ट्रिक स्टोभको फाइदा र बेफाइदा
हामीले घरमा प्रयोग गर्ने कुनै पनि उपकरण केही फाइदा र बेफाइदाहरूको अधीनमा छ। जब हामी चुलो प्रयोग गर्न जाँदैछौं, हामीसँग सधैं बिजुली, ग्यास वा परम्परागत काठको स्टोभ छनौट गर्ने बारे शंका हुन्छ।
आउनुहोस् विद्युतीय चुलोका फाइदाहरू हेरौं:
राम्रो दक्षता। सामान्यतया, बिजुलीका चुलोहरू ग्यास वा काठको चुलो भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन्, किनकि उनीहरूलाई महँगो इन्धन र निरन्तर रूपमा आवश्यक पर्दैन। छोटो अवधिमा, तिनीहरू एकदम सस्तो छन्।
इलेक्ट्रिक स्टोभको अर्को फाइदा हो आफ्नो नियन्त्रण। ग्यास वा काठको चुलो भन्दा विद्युतीय चुलोको आउटपुट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ, आवश्यकता अनुसार, हामी अधिक वा कम तापमान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
इलेक्ट्रिक स्टोभहरू सामान्यतया सस्तो छन् बाँकी भन्दा।
आगो वा ग्यासमा भर परेर माथि उल्लेखित सावधानीहरू पालना गरिएमा,सबैभन्दा सुरक्षित छन्.
यस प्रकारको स्टोभ सफा गर्न धेरै सहज छ ग्यास वा दाउरा भन्दा।
तिनीहरू विकिरणद्वारा तातो हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूले प्रदूषित वा अक्सिजन खपत गर्दैनन् कोठा को।
यो छिटो साना ठाउँहरू तताउनको लागि आदर्श हो।
यदि चाहियो भने, तिनीहरू ह्यान्डल गर्न धेरै सजिलो र आकारमा सानो छन्।
अर्कोतर्फ, यसको बेफाइदाहरू पनि छन्:
बिजुलीको महसुल बढेको छ बिजुलीको चुलो दैनिक रूपमा प्रयोग भएको बेला यो उल्लेखनीय हुन्छ।
प्रतिरोधकहरू धेरै तातो हुँदा आगो लाग्न सक्छ, यदि यो ज्वलनशील वस्तुहरु को नजिक स्थित छ।
तपाईंले त्यो हेर्नुपर्छ बच्चाहरु टाढा रहन्छन् धेरै धेरै वा प्रतिरोधकहरू छुनुहोस्।
प्रतिरोधलाई तोड्न सजिलो हुन्छ र परिवर्तन गर्नैपर्छ।
यस जानकारीको साथ तपाईले बिजुली स्टोभहरू बारे थप जान्न सक्षम हुनुहुनेछ ताकि तिनीहरूबाट उत्कृष्ट फाइदा लिन र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा सधैं निश्चित हुनुहोस्।
1 बिजुली स्टोभ को तुलना
1.2 कम्फर्ट मिनी एक्सेल इको
1.4 रोवेन्टा दुआलियो
2 सस्तो बिजुली स्टोभ
3 सजावटी ज्वाला प्रभाव इलेक्ट्रिक स्टोभ
4 बिजुली स्टोभ को प्रकार
5 के बिजुली स्टोभ खतरनाक छ?
6 बिजुली स्टोभ कसरी काम गर्छ
6.1 एन्ट्राडा डे एनर्जी
6.2 प्रतिरोधकहरूको प्रज्वलन
6.3 घटक शक्ति
7 इलेक्ट्रिक स्टोभको फाइदा र बेफाइदा
स्टोभ » इलेक्ट्रिक स्टोभ
"विद्युत चुलो" मा 1 टिप्पणी
लुइस मोलिना मेन्डेज
मे २,, २०१ 27 बिहान २::2020 बिहान
मलाई सजावटी इलेक्ट्रिक स्टोभ चाहिन्छ